श्रीमतीलाई अंश दिनुपर्ने भएपछि श्रीमानले जलाए १० लाख डलर ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/श्रीमतीलाई अंश दिनुपर्ने भएपछि श्रीमानले जलाए १० लाख डलर !
ओटावा– पारपाचुके गरेकी श्रीमतीलाई अंश दिनुपर्ने भएपछि क्यानाडाका एकजना ब्यापारीले १० लाख क्यानेडियन डलर आगो लगाएर नष्ट गरेका छन् । क्यानाडाको राजधानी ओटावाका बासिन्दा रहेका ब्रुस मककोनभिलले पारपाचुके गरेकी श्रीमतीसँग आफ्नो सम्पत्ति अंश लगाउनु पर्ने भएपछि आफूले त्यसो गरेको दाबी गरेका हुन् ।
बिदेशमा बिभिन्न पदका लागि हजारौ संख्यामा नेपाली कामदारको माग !
जापानको सीप परीक्षामा सबै फेल, पहिलो चरणमा कोहि पनि जान नपाउने
खलः पुचःद्वारा नखःत्या नबोलाउन अपील